हात्तीले सुँडले बोकेर चन्द्रगढी वनभित्र लगेको महिला ४ घण्टा पछि शव भेटियो – Anusandhan Online
झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गोरु तस्करी !
झापामा प्रहरीकै आँखा अगाडीबाट गुरु तस्करी !
झापामा जंगली हात्तीको बिगबिगि
घरबाट सुरु गराैं लैङ्गिक हिंसा बन्द गर्न !
सत्रुलाइ पनि नपरोस यस्तो पिडा
मेचिनगर ६का एमालेका २४ जना माअाेवादि केन्द्रमा प्रवेश
‘रिभेन्ज’ मा खगेन्द्र ‘खराे’काे इन्ट्री – फिल्म हेरेपछि दर्शकका आँखा रसाए !
एमाले महाधिवेशन प्रचारका लागि ७७ वटै जिल्लामा मोटरसाइकल र्‍याली गर्ने
सशस्त्र प्रहरी बल झापाद्धारा २ केजी चाँदी सहित २ जना नियन्त्रणमा
पत्रकार कुशलवका आक्रमणकारीलाई तीन दिन भित्र पक्रिने प्रहरीको प्रतिवद्धता
मुख्य पृष्ठ /News/हात्तीले सुँडले बोकेर चन्द्रगढी वनभित्र लगेको महिला ४ घण्टा पछि शव भेटियो
हात्तीले सुँडले बोकेर चन्द्रगढी वनभित्र लगेको महिला ४ घण्टा पछि शव भेटियो
झापा । जङ्गली हात्तीले सुँडले बोकेर वनभित्र लगेको महिलाको शव भेटिएको छ । मृत्यु हुनेमा बिर्तामोड नगरपालिका- ८ स्थित नेपाल चोक निवासी शुकलाल मर्डीका ५० वर्षीया श्रीमती लतुमाई मर्डी रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए । हात्तीले सुँडले बोकेर जङ्गलमा लगेको लतुमाईको शव चार घण्टापछि चन्द्रगढी सामुदायिक वनभित्र रहेको सेती खोलाको पैनी भेटिएको उनले बताए ।
प्रहरीका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजेर ५० मिनेटमा भद्रपुर नगरपालिका- १० स्थित देउनियाँ नजिकैको चन्द्रगढी सामुदायिक वन नजिकै मर्डी दम्पती निगुरो टिप्न गएका थिए । सोही बेला जङ्गली हात्तीले शुकलालकी श्रीमती लतुमाईलाई सुँडले बोकेर जङ्गलभित्र लगेका थिए । श्रीमतीलाई हात्तीले लगेको तत्काल उनका श्रीमान् शुकलालले अस्थायी प्रहरी चौकी गरामनिलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि महिलाको खोजीका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापाका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासी जङ्गल पसेका छन् । खोजी गर्ने क्रममा महिला मृत भेटिएको हो । उनको शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पोस्टमार्टमका लागि मेची अस्पताल पठाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न युवा संघ झापाको आग्रह
माउण्टेन बाइक निःशुल्क सर्भिस क्याम्प
काँकरभिट्टा खानेपानी चुनावमा कस्ले मार्ला बाजी ?
लोपोन्मुख सन्थाल जातिको लागि व्यवस्थित बस्ती निर्माण हुने
गौंरादह चामल काण्ड को चिरफार नगरी राजधानी नजाने ज्वालाको चेतावनी
ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउदैं वडाध्यक्ष ! गल्ती भयो – पनेरु
रहेनन् होलीबेल माविका प्रिन्सिपल अणु प्रधान
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मागुरमाडीमा एकको मृत्यु
काग्रेस नगर सचिवमा घिमिरे उम्मेदवार घाेषणा
अनुसन्धान मिडिया प्रा.लि द्वारा सञ्चालित
ठेगाना : मेचीनगर ६ झापा
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नम्बर दर्ता न १३८०/०७५-७६
सम्पादक : खगिन्द्र प्रसाद घिमिरे
फोन नम्बर : ९८५२६६२३८२